ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
ကျောက်ဆည်ခရိုင် တံတားဦးမြို့နယ်တွင် Volunteer များအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့သော ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက တံတားဦးမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် တံတားဦးမြို့ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စိုးက အမှာစကားပြောကြားပြီး ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ လူမှုကူညီရေးအသင်းများ လက်ဝယ်အရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည်။
Read more about ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့လူနာသစ် ၂ ၂၉ ဦးထပ်တိုး
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူများနှင့် အသွား အလာကန့်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအား ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၄-၉-၂၀၂၁)ရက် ည ၈ နာရီမှ (၅-၉-၂၀၂၁)ရက် ည ၈ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၂၇၀၄၂ ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် ၂၈၂၉ ဦးတွေ့ရှိရသည်။
Read more about ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့လူနာသစ် ၂ ၂၉ ဦးထပ်တိုး
ရုက္ခဗေဒအမည်- Eclipta Alba Hassk
Read more about ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် အဓိကပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါများ
Nipah virus reappears in India’s Kerala state
A 12-year-old boy died of Nipah virus in India’s southern state of Kerala on Sunday,aFederal Health Ministry official confirmed.
Earlier, the Nipah virus had hit the state’s two districts Kozhikode and Malappuram, in May-June 2018, leading to more than 15 deaths.
Read more about Nipah virus reappears in India’s Kerala state
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့လူနာသစ် ၃ဝ၇၈ ဦးထပ်တိုး
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာနှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့ခဲ့သူများနှင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်းအား ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၃-၉-၂ဝ၂၁)ရက် ည ၈ နာရီမှ (၄-၉-၂ဝ၂၁)ရက် ည ၈ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း ၃၁၉၇၃ ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် ၃ဝ၇၈ ဦး တွေ့ရှိရသည်။
Read more about ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့လူနာသစ် ၃ဝ၇၈ ဦးထပ်တိုး
အိမ်ရှင်မတို့ နေ့စဉ် စီမံချက်ပြုတ်ပေးနေကြတဲ့ ငါးဟင်းလျာများမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါးတစ်မျိုးချင်းစီမှာ ဘယ်လိုအားသာချက်၊ အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းသိထားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် သင့်မိသားစု ကျန်းမာရေး အတွက် တစ်မျိုးတစ်ဖုံစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Read more about ငါးမျိုးစုံ အာနိသင်အဖုံဖုံ
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့လူနာသစ် ၃၄၁၀ ဦးထပ်တိုး
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူများနှင့် အသွား အလာကန့်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအား ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂-၉-၂၀၂၁)ရက် ည ၈ နာရီမှ (၃-၉-၂၀၂၁)ရက် ည ၈ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၃၃၃၆၁ ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၄၁၀ ဦးတွေ့ရှိရသည်။
Read more about ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့လူနာသစ် ၃၄၁၀ ဦးထပ်တိုး
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေး ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ နေ့စဉ်စစ်ဆေး ထုတ်ပေးလျက်ရှိ
Read more about ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေး ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ နေ့စဉ်စစ်ဆေး ထုတ်ပေးလျက်ရှိ